トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Kudzidza Unobata nyore kuti zvinoedza kubva mamiriro akaisa nepachinko yokumusoro kwesimba
In nepachinko parlors, yakabudisa chigadzirwa saizvozvo sezvo mamwe maindasitiri, kureva, pane inokurudzirwa muenzaniso. Zvazvichaita kutokurudzira womuenzaniso akasiyana mune nerimwe nepachinko yaiitirwa, apo chii kombiyuta yokutevedzera, tichakurukura sei kuongorora kana yakarumbidza muenzaniso muchitoro.
How kuziva zvakanakisisa zvavakabvumirana womuenzaniso yakareruka. Izvi, zvinoita sokuti ndizvo zvawakaita mune chero nepachinko parlors. Chokutanga, kubva pamberi pasuo nepachinko yaiitirwa, tora timboona muenzaniso kuti yave kuiswa panzvimbo vanogona nyore kuona kwazvo. Kana kunze Xintai nhamba muenzaniso yokutevedzera yakakura, ndiko billboard muenzaniso pasina muenzaniso zvakaipa.
Mukuwedzera, hombe Xintai yokutsiva, nezvimwewo, iri nyaya kudzidzisa vakawanda pakati nhamba iri, ungada kuisa michina itsva nzvimbo iyi. Front chiteshi, ndipo mutengi unouya kuzoshanyira mu huru. Nokuti chinangwa, kuti mienzaniso kuti vakaisa kupfuura simba zvino nepachinko yokumusoro, kuiswa kupfuura kusiyirira nzvimbo yava chenhando.
mune mamwe maindasitiri, akarumbidza chigadzirwa uchava vanoonekwa vakauya pedyo nesuo, zvichava kuti vari kuita mumamiriro ezvinhu akafanana chero. Uyewo pedo nomukova mapepa uye POP ngatitarisei. The dzepedyo muenzaniso kuna
mberi yokutanga, POP, etc. kufurira Panofanira kuva dzinenge pasina anosara. Zvinonzi akagadzawo ari kupfuura kusiyirira panzvimbo billboard mienzaniso uye achangobuda yokutevedzera, ingava pfungwa yakanaka yeuka nokuti yendarama mutemo. In muenzaniso, rinotaura asiri billboard womuenzaniso uye Xintai ndiko, achitaura kana anoiswa chero nzvimbo, kana muri paanoiswa-kubva pedo weshure, isu kazhinji zviri kuiswa kuseri kosi.
Achitaura sei, pedo weshure ane kupinda uye napanobudiwa napo vatengi, ndiko kufurira vanhu vaiuya kupinda kubva padhoo kuti quasi-inokurudzirwa yokutevedzera. The vaishanya vaenzi kubva mberi hwomukova vakafurira wemasaini womuenzaniso uye Xintai, vatengi vanouya kupinda muchitoro kubva padhoo, kuerera kuti induces munhu quasi-yakarumbidza mienzaniso ndiro.
Zvisinei, pane nyaya kuti chaizvo quasi-varumbidzwa yokutevedzera, kuunza seri kosi. Uye chinangwa chayo, pamwe pamusuo Kwete chete pedo, Ini, kurongeka kwakadaro batanidza zvakaenzana kushanda mu yose chitoro. Kana Kunoonekwa aine run rimwe muenzaniso kumashure, rakatanga kushanda nechishamiso nezvimwe yokutevedzera. Kuti isu iiswe pamusoro kushandisa induction maturo.
Uyezve, kunyange kana makaisa munhu quasi-yakarumbidza yokutevedzera kumashure, kuva nechokwadi weshure uye pamberi okusuma, panofanira kuva POP. Kamwe ari muchitoro, uchawana zvitoro mamiriro akanaka uye kupa tsika nguva dzose kutarira POP uye mapepa. Nenzira iyi, nzvimbo yokutevedzera, tichitarisa kuyera zvinobatsira uye kuvaparadzanisa mwero iri nepachinko yokumusoro chikuru maatomu akafanana.
muenzaniso kuisa muchitoro isimba kunze Xintai, nekuti pane nguva apo ezvipikiri rava inotapira, ndapota tarisa nemitoo yose cheki. Kubva yakatarisana rose zvishoma, pamusoro kupinda muchitoro, asi chii uri iwe yakarumbidza nhasi, zvitoro, zvakadai akaramba kuti kana vakaisa simba pakarepo pachena.